← आकासमा उडिरहने सोफिया सपना
अब जीमेलबाट निःशुल्क फोन गर्न पाइने →
राजसंस्था अन्त्य जनचाहनाले होइन, विदेशी खेलबाट पूर्वयुवराज पारस
नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था’bout यहाँको बुझाइ कस्तो छ?
(स्वार्थ) छ। हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी यही होजस्तो लाग्छ। आजको परिस्थितिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ठूलो खेल छ।
पछिल्लो समयमा देश र जनताले चाहेजस्तो अवस्था नहुनुमा वैदेशिक चलखेल वा हस्तक्षेप नै हो भन्ने यहाँहरूको बुझाइ हो?
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’bout यहाँ के भन्नुहुन्छ?